Sawir gacmeedyada 'Kuwa barakaysan' iyo 'The dammed' by Scarpella | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan fiiro gaar ah u leenahay labo farshaxanno la sameeyay by Livio Scarpella oo loo yaqaan 'Kuwa barakaysan' iyo 'The dammed', laba tusaale oo ah shaqooyin lagu sameeyay marmar, quartz iyo amethyst. Markii qofku u fiirsado labadan farshaxan si faahfaahsan, laba waji ayaa soo muuqanaya, laakiin haddii aan taas tixgelinno ma aha weji laftiisa mana jiro wax taabasho dabiici ah laakiin farshaxanku wuxuu naga dhigayaa inaan rumaysanno inay runti jirto insaan madax ah oo halkaas lagu matalayo, shaki la’aan waa shaqo la yaab leh.
Dusha sare ee sawirka wajiyada waa dabiici waana ay yihiin laba qaybood oo leh hanad cajiib ah halkaas oo farshaxanku ku muujiyo dhammaan hadiyadiisa iyo xirfadihiisa. Waxaan ka heli karnaa shaqo la mid ah Masiixa xijaaban sida aad hoos ku arki doontaan.
Masiixaani xijaaban wuxuu ahaa waxaa sameeyay Giuseppe Sanmartino sanadkii 1753.
Faahfaahinta waxa ku yaal xijaabka labada taallo Waxay umuuqataa inay ka samaysan tahay shey kale laakiin maahan, Maaddaama lagu xardhay isla marmar taas oo siinaysa xitaa tayo sare shaqada laga qabtay. Xijaabka laftiisa waa dhalanteed uu farshaxanku u sameeyay si uu wajiga oo dhan u qaabeeyo.
Isla Matxafka Prado ee ku yaal Madrid waxaan ka heli karnaa taalo kale xiran xijaabkan 'Isabel II xijaaban', oo aad ka heli karto mid ka mid ah qolalka matxafkan caanka ah ee caanka ka ah caalamka.
Haddii aad rabto raac shaqada Livio Scarpella waad heli kartaa Facebook kaas oo uu ka bixiyo sawirro kala duwan oo ka mid ah shuqulladiisa. Raadin dhab ah oo loogu talagalay kuwa ka hela farshaxanimada qaab dhiirrigelin ah oo loogu talagalay iskood u sameynta barnaamijyada sida Maya ama Blender.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Labada farshaxan ee Livio Scarpella oo lagu sameeyay marble, quartz iyo amethyst
Hal-abuurka usbuuca: Naara Riveiro waxay soo bandhigeysaa Alaabaheeda Paper